Xisbiga Waddani Oo Dhoollatusyo Waaweyn Kusoo Gabagabeeyay Ololaha Doorashada Iyo Musharrax Cabdiraxmaan Cirro Oo Fariin U Diray Labada Murrashax Ee Kale | #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Xisbiga Waddani Oo Dhoollatusyo Waaweyn Kusoo Gabagabeeyay Ololaha Doorashada Iyo Musharrax Cabdiraxmaan Cirro Oo Fariin U Diray Labada Murrashax Ee Kale
Hargeysa(ANN)-Boqolaal kun oo taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani ah ayaa isugu soo baxay fagaareyaasha gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Somaliland maalinta 7-aad ee xisbiga Waddani ahna maalintii u dambeysay ololaha doorashada Madaxtooyada Somaliland ee November 13 2017. Xisbiga Waddani ayaa cududiisa si laxaad leh u muujiyay waxaana fagaareyaasha isugu yimi jamaahiirta xamaasadaysan ee astaamaha iyo calanka liimiga ah ku gaashaaman.
Madaxda xisbiga ayaa khudbadahoodii u dambeeyay ee ololaha u jeediyay kuna boorriyay in ay isbedelka Waddani hoggaaminayo taageeran kana tuuraan talada xisbiga Kulmiye.
Murrashaxa Madaxweynaha Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa kumanaan taageerayaashiisa ah oo isaga yimid daafaha caasimadda Hargeysa kala qayb galay dabaal degga Beerta Xorriyadda Hargeysa, isaga oo markii dambena degaanno ka tirsan gobdolka Hawd u baxay si uu shucuurtooda ula wadaago taageerayaasha la dhacsan isbedelka uu ku baaqay. Murrashaxa Cabdiraxmaan Cirro ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyay tobanaan kun oo soo camiray beerta xorriyadda Hargeysa kuwaas oo uu kula dardaarmay taageeridda isbedelka iyo in ay Kulmiye bedelaan.
Murrashax Cabdiraxmaan Cirro waxa uu sheegay in 21 cisho oo ololaha doorashadu socday iyo socdaallo uu dalka ku maray uu ka dareemay in rabitaanka shacbigu yahay in Kulmiye talada dalka laga wareejiyo “Somaliland kharriidadeeda meelkasta iyo telefishan walba waxa ka muuqday calanka iyo astaanta liimiga ah ee isbedel doonka ah. Walaalayaal marka aan ka qiyaas qaatay isu soo bixiinan Hargeysa oo isu soo bax la mid ahi ka jiro gobolka Awdal, gobolka Saaxil, Gobolka Togdheer, gobolka Sool iyo gobolka Sanaag xaqiiqadu waxay tahay in shacbigu doonayo Kulmiye in la bedelo.
Waxa caddaatay in aanu shacbigu qaybsanayn oo aanu ahayn Waarso iyo Naato oo aanu ahayn Jeegaan ee uu yahay shacbi midaysan oo Giraan ah, waa shacbi ku midaysan dareenkiisa. Walaalayaal waxa xusid mudan dareenka ka jiray gobollada darafyada ee Sool ka jiray ee Sanaag ka jiray ee Awdal ka jira, waxaanu soo aragnay umad aan qaybsanayn, umaddaasi hal mid ayay ku midaysan tahay oo ah Badaluu Badaluu Badaluu,” Sidaas ayuu yidhi Musharrax Cabdiraxmaan Cirro.
Cabdiraxmaan Cirro waxa uu sheegay in uu dawo rasmi ah u noqonayso musuqmaasuqa, qabyaaladda, qaraabo kiilka iyo hantida la iibiyay oo la soo celiyo, islamarkaana uu wax ka qabanayo sixir bararka, qiimo beelka shilinka Somaliland, shaqo la’aanta, abaaraha soo noqnoqday iyo jahaynta hannaanka citiraaf radiant Somaliland. Waxa uu sheegay in uu ka dhabayn doono ujeedada dawladnimada loo samaystay ee ah horumar nololeed. Waxa uu sheegay in uu samayn doono hay’ad maaraysay sixir bararka iyo hay’ad la tacaasha ka hor tagga abaaraha soo noqnoqday.
Murrashaxa xisbiga Waddani waxa uu sheegay in hoggaanka Kulmiye iyo UCID wakhti badan galiyeen been abuur ku saabsan warqado foojari ah oo ay leeyihiin Waddani ayaa Xamar gaynaya Somaliland laakiin, shacbigu aanay dheg u dhigin, waxaanu sheegay in madax bannaanida Somaliland tahay go’aan shacab oo aanu Waddani iyo Kulmiye midna bedeli karin “ Waxaan leeyahay Xamar lagu tartami maayo ee Hargeysa ayaa lagu tartamaya ee shacbiga u soo bandhiga waxa aad ka iibinaysaan. Waxaan leeyahay arrimahaasi waa garaadkooda waa Garaadka Muuse. Walaalayaal aniga iyo xisbiga Waddani midna ma aamminsana in Bee lama Koox Somaliland ka mid ah ay u shaqayso Soomaaliya waase Muuse iyo Garaadkii.
Xisbiga Waddani waxa uu aamminsan yahay in shacbiga Somaliland yahay dad walaalo ah oo leh xuquuq siman. Ma dhici karto in la yidhaahdo beel baa beel loo baryay ama qof baa qof loo baryay, waxaynu doonayna in aynu abuurno shacab awoodaha xilalka dalka iyo khayraadka u siman. Waxaan leeyahay wax walba oo aad samayn karayseen waad samayseen laakiin, ma badbaadin kartaan doon degaysa ee wax ku qaata dareenka shacabka. Waxaan baaq u diraya New Kulmiye iyo Faysal oo aan leeyahay haddii aydaan tartami karayn dee iska tanaasula,” Sidaas ayuu yidhi Mudane Cabdiraxmaan Cirro.
Murrashaxa Cabdiraxmaan Cirro waxa uu sheegay in xukumaddiisu Ciidamada kala duwan ee Qaranka mushaharka u kordhin doono 250%, islamarkaana la xaqsiin doono askari kasta oo waajib Qaran ku dhinta ama wax ku noqda, sidoo kale guryo u dhisi doono Ciidamada. Waxa uu sheegay in la samayn doono xafiiska hawlgabka shaqaalaha dawladda si dadka waaweyn ee Qaranka u soo shaqeeyay loo nasiyo. Waxa uu sheegay in xukumaddiisu mushaharka u kordhin doonto shaqaalaha, macallimiinta iyo cuqaasha “Xisbiga Waddani hanti kasta oo dalku lahaa oo sifo sharci darro ah ku baxday gacanta shacbiga lagu soo celin doona. Anaga oo og shaqo la’aanta baahsan mudo xileedka hore ee 5-ta sanno xisbiga Waddani waxa uu abuuraya 15000 shaqo. Waxaanu dejinay qorshe wax lagaga qabanayo sixir bararka laguna kordhinayo dhaqaalaha laguna dhiiri gelinayo maalgashiga. Biyo la’aanta Hargeysa waanu dawaynayna oo biyo ku filan ayaanu caasimadda u keenayna. Somaliland waxaanu u caddaynayna in aanu Musuqmaasuqa la dagaallamayno si dulqaad la’aan ah. Waxaanu adkayn doona amniga Qaranka. Amniga Somaliland marnaba gorgor tagan ma galayo.
Dalalka dariska waxaanu kula noolaanayna nabad iyo daris wanaag, waxaanuse uga digayna in ay faro geliyaan doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland ama ay ku kacaan tallaabo kasta oo wax u dhimi karta amniga iyo jiritaanka Somaliland,” Sidaas ayuu yidhi Musharrax Cabdiraxmaan Cirro.
Guddoomiyaha Waddani waxa uu shaaciyay in uu cafiyay dhalinyaro gurigiisa shiiday oo uu sheegay in hoggaanka Kulmiye soo khalday waxaanu booliska ka codsaday in dhalinyarada dib loogu celiyo waalidkooda. Waxa uu taageerayaashiisa kula dardaarmay adkaynta ammaanka iyo in aanay la ficil tamin Kulmiye oo uu ku eedeeyay in uu rabshado aloosayo.
Geesta kalena Hoggaamiyaha xisbiga Waddani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa tobanaan kun oo jamaahiirta liimiga ah kula hadlay fagaaraha magaalada Burco oo ay camireen “Reer Somaliland maaddaama ay codkooda soo bandhigeen oo muujiyeen waynu guulaysanayna maxaase loo baahan yahay? Marka la codeeyo ayaa lagu gaadhaya guusha, maaha isu soo baxa, sawaxanka iyo qaylada waxa lagu gaadhayo guushu.
Qolada reer Kulmiye ee dadka inta ay Basaska ku soo guraan moodaya in sidaas lagu guulaysanayo waxaanu leenahay waa kuwa dadkii si toos ah halkaas u tuban. Waa dadkii reer Togdheer oo cid walba leh, koone walba ka yimid, doorashadooda ku yimid oo aan cidi lacag siin.
Kulmiye waxaan leeyahay waa la codaynaya oo ololihii dhammaaye qaska inaga ilaaliya. Waxaa durba idinka muuqata in aad cadhooteen, waxa durba idinka muuqda in aad salbabakhdeen, waxaa idinka muuqata in durba degenaanshihii idinka lumay, yaanu degenaanshuhu idinka lumen. Ciyaarta waxa loo soo diyaar garooba marka hore, waa la qorshaysta oo istiraatijiyad iyo qorshe aad ku guulaysto ayaa loo sameeya ee habeen iyo maalin wax lagu seexdo maaha idinkuna cannaanta iska daaya dalkana qaska ka daaya,” Sidaas ayuu yidhi Mudane Xirsi.
Ololaha doorashada Somaliland ayaa ahaa mid xamaasad leh oo si weyn looga dareemayay guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka waxaana loo dareeri doona codbixinta la soo dhammeeyay dhoollatusyadeedii ololaha ee lagu soo hirdamay.